I-Offshore Trust -Izibonelelo, uKhuseleko lweeAsethi, uLawulo kunye noQeqesho
I-Offshore iTrasti yoKhuseleko lweeaseti
Iingcali ezininzi zokukhusela iiasethi ziyavuma ukuba Ukuthembela kude nonxweme kulawulo olukhethwe ngokufanelekileyo esona sithuthi someleleyo sokukhusela iiasethi kwihlabathi liphela. The Isiqithi saseKhuk Ukuthembela kubonise ukunikezela ngembali yomthetho yokhuseleko lweeasethi. Nguye elona gunya lilungileyo ukukhusela iiasethi ngokoluvo lwethu. Masithi inkundla yendawo ifuna intlawulo. Gcina ukhumbula, inkampani ethembekileyo kwii-Cook Islands, ebekwe ngaphandle kolawulo lwenkundla yendawo yakho. Ke ngoko, itrasti (eyenzeka kuthi ifemu yomthetho wonxweme) ayinyanzelekanga ukuba ithobele umyalelo wenkundla. Ngenxa yoko, ilayisenisi, idityanisiwe, i-inshurensi 30+ ubudala Inkampani ethembekileyo igcina iiasethi zakho zingabikho kwingozi. Ukulungiselela uxolo-lwengqondo lwabathengi esisekayo inkampani enamatyala aselunxwemeni (LLC) eyi-100% yeyabaphathiswa. The umxhasi ngumphathi we-LLC.
The iiakhawunti zigcinwa kwi-LLC kwibhanki yamanye amazwe ekhuselekileyo. Umxhasi utyikityile kuzo zonke iiakhawunti zebhanki. Xa kwenzeka "into embi" kwaye ii-asethi zinokubakho ekuthinjweni ziinkundla. Ke, itrasti inokungena njengomphathi we-LLC. Oko kukuthi, benza le nto uyihlawule inkampani ethembekileyo ukuyenza - ukukhusela iiasethi zakho. Nje ukuba isoyikiso esisemthethweni sidlule, umthengi ubuyiselwe njengomphathi we-LLC kwaye iiasethi zisasebenza. Uphando lwethu lubonakalisile ukuba i-Cook Islands ethembekileyo eyakhiwe kakuhle ikhusele iiasethi zabaxhasi kuyo yonke imiceli mngeni kwezomthetho.
I-Offshore Trust ngokuchasene neTrasti yesiNtu
An Ukuthembela kude nonxweme kufana nokuthembeka kwendabuko. Kananjalo, ibandakanya ubudlelwane okanye ulungiselelo phakathi kwala maqela alandelayo: iiTrasti, ii (Settlor (s), kunye ne "Beneficiary (ies)." Izibonelelo zenziwe kuxwebhu olubophelelayo, olubhaliweyo olusemthethweni. Oku sikubiza ngokuba “sisiGqibo seNtembeko.” Esi sixhobo somthetho sinokubamba isihloko kwimpahla kunye nepropathi. Inokulawula iiasethi ezichaziweyo ngokungqinelana nesivumelwano setrasti. Kwaye kunokubonelela ngothotho lwezibonelelo kunye nolwabiwo lomntu okanye kwiqela labantu. Itrasti ichaza aba bantu njengabaxhamli. Nanku umahluko. Masithi ijaji kwelinye lolawulo lifuna ukuba imali iguqulwe. Ngethamsanqa kuwe, itrasti (iofisi yethu yomthetho elunxwemeni) kulawulo lwangaphandle ayinyanzelekanga ukuba ithobele.
Itrasti kunye / okanye inkampani ethembekileyo ejongene nolawulo lwetrasti. Babotshelelwe ngumsebenzi wokugcina isivumelwano. Ngokutyikitya uxwebhu bayavuma imigaqo kunye neemfuno ezichazwe kwi-trust deed. Itrasti ayifani nombutho okanye isiseko. Olu hlobo lokuthenjwa sisivumelwano esibhaliweyo. Icacisa ukuba iTrasti ukubonelela abaxhamli kunye nokukhusela iiasethi kumarhamncwa.
Ukuthatha isigqibo sokwenza iTrasti yoKhuseleko lweeasethi kude nonxweme
Okokuqala, indawo yokuhlala ithathe isigqibo sokwenza ukuthembana. Emva koko, indawo yokuhlala kufuneka emva koko ikhethe uhlobo lwentembelo anqwenela ukuyenza. Oku kubandakanya ubude bayo, obunokuhlala buhleli. Indawo yokuhlala nayo (ngoncedo lwethu) iya kwenza izigqibo ezibalulekileyo ekuchazeni iinkcukacha. Ezi nkcukacha zibandakanya ukuthatha isigqibo sokuba ukuthembana kuyabuyiselwa okanye akunjalo. Babandakanya ukuba ukuthembela kuya kuba kukuqonda okanye akunjalo. Ngapha koko, iya kuchaza amalungelo, imisebenzi, uxanduva, kunye nokulindelweyo wetrasti.
Ngoku makhe siqwalasele ingqibelelo enokuthenjwa okanye engenakuguqulwa. Njengamagama abo athetha ukuba, ukuthembakala okunokurhoxiswa kunokurhoxiswa nangaliphi na ixesha kunye nemigaqo yoku echazwe yindawo yokuhlala. Ngenye indlela, banokuba nexesha elimiselweyo lobomi (okanye banokuhlala ngokungenammiselo) ngaphandle kwamalungiselelo okusebenza kwakhona. Oko kukuthi, inokugqiba okanye ingagqibi ngokuxhomekeke kwimigaqo yendalo yayo njengoko kuchaziwe kwitayitile yesivumelwano.
Ngokuchaseneyo, i-discretionary trust inokuwela phantsi nokuba kukweliphi inqanaba, kwaye ichazwa njengetrasti enezinto ezininzi ezakhelweyo ezibhetyebhetye ngokubhekisele kwindlela ophathiswe ngayo ukuphatha ulwabiwo kubaxhamli, kwaye ade abonelele, kwezinye iimeko, umphathiswa onamalungelo okuqesha okanye yongeza abaxhamli. Oku kuyekisa uninzi lwegunya ngaphezulu Ukuthembela kude nonxweme kwi-trustee, nangona kunjalo, kwaye ibalaselisa ukubaluleka kokukhethwa ngononophelo komntu onobuchule, owaziwayo kakuhle okanye inkampani ephethe i-trust enezalathiso ezilungileyo, igama elifanelekileyo, kunye namava ayimfuneko ukuze azalisekise ngempumelelo nangokunyaniseka kwaye ahloniphe imigaqo yetrasti .
Izibonelelo zeTrustshore Trust
Ukubekwa kweeasethi kunye nesihloko kwipropathi kulapho isabelo sengonyama semfihlo kunye nokukhuselwa kwizibonelelo zamatyala e-offshore trust zifunyenwe. Ngelixa isihloko esisemthethweni sidlulela kumphathiswa, ekufuneka azalisekise uxanduva olubekwe kwitrasti. Injongo yokuthembela kukubonelela kubaxhamli, apho kuhlala khona, kwaye kuhlala kunjalo, kuthathe inxaxheba. Aba baxhamli, banamalungelo awomeleleyo ngokubhekisele kwimidla yetrasti kwaye uninzi lwamagunya luyaqonda ukuba Injongo kukubonelela ngezibonelelo, njengoko kuchaziwe kwi-trust yesivumelwano, kwaba baxhamli kwaye lawula kakuhle kwicala labo xa kuvela imibuzo malunga nolawulo lwentembeko.
Kungenxa yokuba ezi trasti zonxweme zihlala zifumaneka kummandla werhafu okanye kwimimandla yokhuseleko lweeasethi nge igama lokukhusela ii-asethi kunye nokugcinwa okuyimfihlo enkulu, ukuthembela elunxwemeni kukwaxhamla kwezi zinto. Iiasethi ezilawulwa ngaphakathi konxweme zizinto ezininzi simahla kwimithwalo esemthethweni exinayo ngamanye amaxesha kusebenza kwilizwe lasekhaya lokuhlala okanye kulawulo. Ukuba i-trust yenzelwe ukulungiselela inzuzo yomntu owenze i-trust kunye / okanye abatshatileyo, abantwana okanye ezinye iindlalifa zokuhlala, umzekelo, i-trust ethembekileyo inokubonelela ngendawo yokuhlala ekuhlolisisweni kwelifa. Kubantu base-US ukuthembela kukhuseleko lweasethi kunxweme kuhlala kungathathi cala kwirhafu. Oku, ayonyusi okanye yehlise irhafu yakho.
Ngapha koko, ngokusekwe kubume babo kwiindawo ezikhuselekileyo zokukhusela iiasethi, kunikezelwa ngetrust zonxweme ukugcinwa kweemfihlo okungenakuthelekiswa nanto, ukhuseleko olwandisiweyo kwiingozi zomthetho wamatyala oluntu kunye noxanduva, kwanakwizinto ezinje ngoqhawulo-mtshato. Zikwasetyenziswa ngabaninzi ukukhusela iiasethi kwimeko yolawulo lwasekhaya kwimbambano yezopolitiko okanye yezoqoqosho Kunzima kakhulu, gcina kwiimeko zokumangalelwa ngolwaphulo-mthetho olunobuzaza, ukuze iziko langaphandle lihlaba ikhuselo eliyimfihlo elinento yokwenza netrasti yaselunxwemeni. kwimimandla emininzi.
Apho iFom ye-Offshore Trust
Iitrasti ezingaselunxwemeni zihlala zenziwa kwirhafu ephantsi okanye kwiindawo ezikhuselekileyo zeeasethi ezinedumela elibonisiweyo lolawulo olunempumelelo kunye nokwenziwa kweetrusti kunye netrasti mali. Nangona kunjalo, akuyomfuneko kangako ukuba indawo efanelekileyo ibe yindawo yokurhafisa okanye ibe nemigaqo yokuyekelela – uninzi lweendawo zolawulo lwentembeko eziyimpumelelo kwaye amazwe anikezela ngokulula, iinkampani ezithembekileyo ezinamava ezidityaniswe nemfihlo ebalaseleyo kunye namakhaka easethi amakhulu.
Elinye idinomineyitha eqhelekileyo yeyokuba la magunya aseka imimiselo nemigaqo yabo yokuthembela kumthetho oqhelekileyo wesiNgesi- oku kungenxa yokuba eyona nto ibalulekileyo yokwakha ukuthembana yingcamango yakudala yesiNgesi eyaqala ngexesha leeMfazwe Zomnqamlezo. Eminye imimandla yaseYurophu ebonelela ngempumelelo kulawulo lwentembeko, njengeLuxembourg, iMalta, iSwitzerland, njl., Iye yahlengahlengisa imimiselo kunye nemigaqo yayo ukuze ihambelane neemodeli zolawulo lwentembeko ezifanelekileyo ezichazwe ngabo basekwe kumthetho oqhelekileyo wesiNgesi. Imimandla emi ngaphezulu kwezinye ngokubhekiselele kukhuseleko lweeasethi zeziQithi zeCook, i Ithemba likaNevis naleyo iseBelize, ngokulandelelana kwayo.
Ukusekwa kwetrasti elunxwemeni kufuna uvavanyo lwokwenyani lweenjongo kunye nenjongo yokuhlala, kwaye iya kuthatha ezinye izixhobo ekumiselweni nasekugcinweni kwayo. Ke, nzulu, uphando olwenziweyo, kunye Ingcebiso kunye noncedo oluvela kwiiarhente ezinamava kunye nolwazi kufuneka.
Ukwenza i-trust ethembekileyo elunxwemeni kubonelela ngokhuseleko olukhulu kwii-asethi ezivela kuvavanyo olungalunganga, isimangalo, kunye nembambano yoluntu. Kuya kufuneka ukuba icace gca ukuba ngelixa iindleko zokwakheka nolondolozo zinokuqwalaselwa, ukusekwa kwefayile Ukuthembela kude nonxweme kuya kubonelela ngoxolo lwengqondo kwabo bajonge ukukhusela iiasethi zabo okanye babonelele abantwana babo kwixesha elide.
Ukuhlaziywa kokugqibela ngoDisemba 10, 2021